Shannen Doherty, Celine Dion na kpakpando ndị ọzọ na Kwadoro na teepu cancer
Ụbọchị nke ọzọ na Los Angeles nwere ihe omume ebere na-eguzogide Ọrịa Cancer, na-anakọta ego site na nke a na-ezigara ọrịa cancer. Na mgbakwunye, nzukọ ahụ na-enyere ọtụtụ ụlọ ọgwụ sayensị dị iche iche aka na-arụ ọrụ maka ịgwọ ọrịa ọjọọ a.
Kpakpando na-enyere aka ịzụlite ego Kwadoro Ọrịa
Ugbu a, a na-ewere ya dị ka ezigbo ihe mgbe onye a ma ama na-enyere ndị ọzọ aka ma ọ bụ na-etinye aka na ọrụ ebere. Maka mgbede Na-eguzogide Ọrịa Cancer na Ụlọ Nzukọ Walt Disney n'afọ a, Otú ọ dị, dịka n'oge gara aga, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọbịa kpakpando abịawo. Otú ọ dị, nke a abụghị nanị na ọchịchọ inyere aka, kamakwa n'eziokwu na onye ọ bụla chọrọ isoro ndị ọzọ kerịta mwute ha, n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị nọ na ọ dịkarịa ala otu ugboro na ndụ ha enwewo nsogbu nke ọrịa cancer.
N'etiti ndị ọbịa na ihe omume ahụ, onye nkiri bụ Shannen Doherty na di ya, bụ onye na-alụ ọgụ ugbu a na ọrịa kansa. Site n'ụzọ, ndị ikwu Shannen n'oge na-adịbeghị anya kwuru na ọgwụgwọ ahụ dị mma ma ndị dọkịta na-enye ezi amụma maka ọdịnihu. E wezụga ya, ndị na-eme ihe nkiri ahụ bụ Bradley Cooper jụrụ foto ndị ahụ, onye na-ahazi ihe omume ahụ, Rita Wilson, Emma Stone, Tom Hanks, Maim Bialik, Matt Bomer na ọtụtụ ndị ọzọ. N'ebe ndị ọbịa niile nọ, e nwere T-shirts na Nkwado Ọrịa Cancer.
A na-enwe mgbede na Ụlọ Nzukọ Walt Disney n'Ụlọ Nzukọ Ọhụrụ. Ndị a nabatara oku na fon ma kọọrọ akụkọ na otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ metụtara cancer. N'ime ndị niile na-abụ abụ bụ Selin Dion, ọ bụghị nanị na ọ na-ekwu banyere ahụmahụ ya, kama ọ bụ abụ abụ na-emetụ n'ahụ, pụta ìhè.
14 ndị isi ojii, gbanwere kpamkpam ihe ha ga-eme
Okwu nke Celine Dion kwuru
Onye na-abụ abụ a ma ama nwụnahụrụ di ya Renee afọ a, bụ onye nwụrụ mgbe o nwesịrị ọgụ mgbagwoju anya. Onye na-agụ egwú ahụ nwere ihe omume a nke siri ike nke na ọ pụtaghị na ọha mmadụ ruo ọtụtụ ọnwa. Ọtụtụ ndị enyi gbalịrị ịkwado ya, onye na-abụ abụ Pink dere abụ maka Celine. Site n'abụ a, Dion bịara n'ihu, kwuo n'ihu okwu ahụ:
"Ọrịa cancer m weere nna m na nwanne m nwanyị. Ihe a niile siri ike. N'afọ a, di m nwụrụ site na ọrịa a. Enwere m ya. Renee Ana m echeta kwa ụbọchị ma kwa ụbọchị m ghọtara na ọ ghọwo akụkụ nke ndụ m ruo mgbe ebighị ebi. Ma n'ebe a ọnwa 2 gara aga, onye na-abụ abụ dị egwu Pink enyewo m ihe ijuanya dị egwu. O nyere m egwu Iweghachite, nke nwere ọtụtụ okwu dị mkpa maka ndị na-alụ ọgụ kansa. Aga m eme ya ugbu a, ị ga-anụ ihe niile n'onwe gị. "
Tụkwasị na nke ahụ, Celine Dion keleere onwe ya Bradley Cooper, bụ onye na akwado ya n'oge ọ bụla. O dere banyere nke a na ibe ya na Instagram:
"Jikọọ, ekele gị nke ukwuu! Achọrọ m ịsị gị ekele maka nguzo nile nke na-eguzogide ìgwè ọrịa cancer. Ekele ndị a, ụwa na-amụta otú ọ siri sie ike ịnweta ọrịa cancer. Anụrụ m ọtụtụ akụkọ sitere n'obi na nke na-emetụ n'ahụ bụ ndị mere ka obi m gbasie ngwa ngwa. Nke a bụ ihe ịtụnanya! ".
Alicia Wickander na Michael Fassbender gbara agbamakwụkwọ
Christina Aguilera kpaliri maka ihe eji ekpuchi magazin Peeji n'enweghi ngwugwu
Kim Kardashian gosipụtara otú ahụ ya si dị ka mmiri mmiri
Obi nke isii David Rockefeller kwụsịrị
Tess Holliday boro ebubo Facebook banyere ịkpa ókè megide ndị na-abụ abụba
Lady Gaga ga-eji dochie ime Beyonce na Ememme Coachella
Nkọwa nke ndụ onwe onye Ashley Benson
Uwe uwe agbamakwụkwọ Bar Rafaeli mere ka ọ dị na Intanet
Izu asaa kpochapụrụ foto niile si Selena Gomez
Egwuru egwu onye Serbia Novak Djokovic mụrụ nwa
Eji obi ụtọ Miranda Kerr hụ ya na foto nke swimsuit na Malibu
Jules na Jamie Oliver ga-abụ nne na nna maka oge nke ise
Ọ bụghị nanị na ịgba egwú, kama ọ na-abụkwa abụ: Dita von Teese dere akwụkwọ mbụ ya
Ejiri nyocha maka ụmụ nwanyị zuru oke
Nri na ibu ọnụ
Mmiri cocktails na-enye ume ụtọ n'oge okpomọkụ
Ihe na-akpata nrụgide na-eto eto n'oge a
Achịcha na-egbu achịcha
Resalyut ma ọ bụ Essentiale - nke ka mma?
Tabule - uzommeputa
Mfe ihu bụ nhọrọ kasị mma maka ụdị akpụkpọ anụ niile
Egwuregwu egwu Adidas
Embassy nke Albania na Kazakhstan
Ejiji - Ezumike 2015
Embryo 5 izu
Arụrụ n'ụlọ Mayonezi na-enweghị àkwá
Mgbasa ozi redio site na papillomas
Arthritis Rheumatoid - Ihe
Puff agwakọta batter
Kedu nke ka mma: aerogril ma ọ bụ multivark?
Kedu otu esi eme ka mpempe akwụkwọ dị egwu?
Mkpụrụ oyi kpọnwụrụ maka oyi
Ọkpụ ikpere ikpere